Xitaa qofka magangalyo doonka ah ama Iswiidhan sharci la'aan ku jooga ayaa bilaash tallaalka loo siinayaa. Waxay taasi khuseysaa xitaa qofka Iswiidhan wax ka barta iyo ka shaqeeya iyadoo aanad muwaadin Iswiidhish ah ahayn.
Tallaalka ka hortaga caabuqa covid-19 ee gobolka Skåne
Ballan waad qabsan kartaa hadii ay da´daadu tahay 16 sano iyo wixii ka weyn. Hadii ay 16 sano kuu buuxsameyso sanadkan gudihiis sidoo kale balan qabsan kartaa.
Qabso ballanka tallaalka cudurka [Covid-19] looga hortago
Hadii horay lagugu casuumay tallaal
Ma lagugu casuumay tallaal, islamarkana aad go´anstay in aadan istallaalin?
Halkan waxaa ku qoray sida aad balan u qabsan kartid: Qabso ballanka tallaalka cudurka [Covid-19] looga hortago
Laba todobaad ka dib markaad cirbada ugu danbeysa qaadato ayaad difaac aad u wanaagsan oo badan oo covid-19 ah leedahay.
Dadka qaar ayaa u baahan kara tallaallo dheeraad ah
Waxaa laguu soo bandhigayaa doos saddexaad oo tallaalka haddii mid ka mid ah kuwan soo socda ay ku khuseyso:
Aad degan tahay hoy waayeelka u gaar ah.
Aad leedahay adeega guriga ama adeega daryeelka caafimaadka guriga.
Aad tahay 80 sano jir ama ka weyn tahay.
Xitaa haddii aad leedahay habdhiska difaaca jirka oo aad u dhacsan ayaa laga yaabaa inaad u baahato doos/qadar tallaalka oo dheeraad ah. Dhakhtarkaaga ayaa go'aaminaaya haddii aad taas u baahan tahay.
Dadka ka yar 18 sano jir ayaa u baahan kara ogolaanshaha waalidka/daryeelaha si uu tallaalka ugu helo. La xiriir qof jooga meesha is tallaalistu ka dhacayo haddii aad dooneyso inaad is tallaasho, laakiin aanad ogolaansho haysan.
Waxa aad bogga Så fungerar vaccin ka akhrisan kartaa oo aad ka daawan kartaa filimo talaalka ku saabsan. Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish.
Waxa jirta khatar yar oo aad jirada ku qaadeyso xitaa haddii aad is talaasho.